Challenge The Good News Paper - Rudo rwaisavepo (Shona)
Rudo rwaisavepo (Shona)
Nokuda kwekuva kure nevabereki vake, Genson akaziva kuti aifanira kuda Mwari aizivikanwa nevabereki vake
Paakave nemakore gumi nemaviri, Genson Miambo akabva pamba achienda kunoenderera mberi nedzidzo yesekondari. Sezvo aizvichengeta nokurarama pachake, anoti, "Ndakasanganidzwa nezvivi zvese zvemunyika".
"Ndaiva neshamwari dzaibira vanhu pachikoro. Uye ndakatanga kufambidzana nevasikana vakawanda, vamwe vaiva vahombe kuneni."
Nokuda kwekuti vabereki vake vaive vatendi vechiKristu, Genson anoti, "Ndainyeba kuvabereki vangu ndairarama hupenyu hwakarurama sekundidzidzisa kwavaive vaita, asi ini nekusvondo ndakange ndisingachaendi."
Aikwanisa kuonana nevabereki vake pazororo kaviri pagore chete, naizvozvo Genson anoti, "Ndakasuwa rudo rwevabereki vangu, ndakava nemoyo wehasha nehupanduki. Kwemakore mana, ndakaenderera mberi nekurarama hupenyu hwakaipa zvakaita kuti ndisabudirire mudzidzo yangu yebhuku rechisere (grade 8). Ndaingoita zvandaiona kuti zvakanaka mumeso angu."
Mushure menguva, nekuda kwekusuruwara nekutsamwa, Genson kanyorera vabereki vake tsamba.
"Ndakatsamwira vabereki vangu ndichivapomera kuti ndivo vakange vandiendesa kuchikoro chaive kure nemusha. Ndakanzwa kusuruwara kukuru nekusadiwa. Hasha dzangu dzakaramba dzichikura zvekuti pamwe ndaingoita hasha ndisina kudenhwa."
" Hupenyu hwangu hwakave dambudziko guru and ndakaziva kuti Mwari vakasapindira ndaisasvika makore mashanu ndirimupenyu. Hapana aikwanisa kundiudza nezvaMwari kana kunditsiura muzviito zvangu nekuti vanhu vaiti vasati vatanga kunditsiura ndaibva ndatanga kuvaudza zvandaiziva ini. Zvivaremera kuindura mibvunzo yangu. Ndakazviona semunhu aiva araswa naMwari nevabereki vangu."
Nekufamba kwenguva Genson anobvuma kuti kushungurudzika nekusuruwara kwake kwakaramba kuchiwedzera, zvakakonzera "kuwanda kwemibvunzo yaisava nemhinduro."
Genson anorangarira rimwe zuva achiongorora hupenyu hwake apo "Mwari akataura mumoyo mangu"
"Mashoko aMapisarema 37 ndima yechitatu ataiwanzotaura kumba akauya mundangariro dzangu: 'Vimba naJehovha, uite zvakanaka; Gara panyika, ufunde tariro.'
"Mwari akashandisa mashoko aya kuti ndizive kuti ndaifanira kutenda munaShe, kuitira kuti ndiwanikwe ndichiita zvakanaka uye ndichigamuchira makomborero nekutungamirwa muupenyu hwangu."
Achienzanisa hupenyu hwake hwekushungurudzika nehupenyu hweucheche hwake, Genson anoti, "Ndakaona kuti ndaida Jesu zvikuru muhupenyu hwangu."
"Ndakatanga kunamata sekudzidziswa kwandaive ndakaitwa, ndikakumbiri ruregerero kuzvivi zvangu ndikapa hupenyu hwangu kuna Ishe. Ndakatanga kuenda kusvondo ndikabhabhatidzwa musi wa28 Zvita mugore ra2003, ndave nemakore gumi nematanhatu."
Apo hupenyu hwake hwakatanga kushandurwa naMwari, Genson akareurura nzira dzake dzehupanduki kuvabereki vake, "Vabereki vangu vakanamata neni vakatsanangura rudo noruregerero rwaMwari kwandiri. Havana kundirasa nokuda kwekuvanyepera makore ose aya asi asi vakaramba vaneni."
Mushure mokusiya nzira dzake dzoupardzi, genson anoti kugamuchira Jesu muhupenyu hwake "ndikwo chete kwaidikanwa kuti ndirarame hupenyu kwahwo hunerubatsiro munyika ino".
Jesu vakabvisa mandiri moyo wehupanduki, nzira dzakaipa vakandiita munh anoteerera kana achitsiurwa."
Nhasi ndine shamwari dzinoziva Mwari uye ndakaroora mudzimai akanaka uye ndave kurarama hupenyu hunofadza. Mwari vakandiropafadza nevana vaviri, Miriana ane makore matatu na Daniel ane mwedzi minomwe."
Parizvino Genson arikuita zvidzidzo zvebhaibheri, anoti, "Ndakatarisira kudzokera kuMozambique kunoshumira shoko kuvana vechidii varikusangana nematambudziko ekuparadzana nemhuri dzavo nekuda kwedzidzo, nekuti kusvika parizvino varipo vakawanda varikusangana nematambudziko andakasangana nawo ini."
"Ndinoda kutenda Mwari vakandinubura; vakandishandura nekundiburitsa munzira dzeupombwe, kunyeba nekuba. Pakutanga zvaisave nyore kusiya nzira idzi as Mwari Havana kundirasa kusvika nhasi. Nekuburikdza kwe kweminamato, kuverenga shoko nekusangana nevamwe vatendi, ndavekuwedzera kuteerera Mwari uye ndavekugona kurwisa zvivi zvangu zvekare."
<< Liefde was afwesig (Afrikaans)
Are you naughty or nice? >>